PressReader - Isolezwe: 2018-04-17 - Bakhathazwa eyabafundi abangaxhaswa
Bakhathazwa eyabafundi abangaxhaswa
ISIKAZA ukuya kwiKhomishini yamaLungelo Abantu inyunyana yothisha iNatu ngodaba lokungaxhaswa ngemali kwabafundi abangenabo omazisi noma izitifiketi zokuzalwa.
Le nyunyana ithe udaba ilubike kuNgqongqoshe kazwelonke, uNkk Angie Motshekga kanti ukungaxhaswa kwabafundi kusezintweni aziphenyayo.
Kuthiwa babalelwa ku-400 000 abafundi abangenabo omazisi noma izitifiketi zokuzalwa ikakhulu ezikoleni ezisezindaweni zasemakhaya.
UMnuz Allen Thompson, iPhini likaMengameli weNatu, uthe banike ithuba lokuthi kuphenywe ithimba lomnyango ukuze kutholakale izinto ezingahambi kahle esifundazweni.
Uthe noma umnyango uthi uyabaxhasa abafundi abangenazo izitifiketi noma omazisi kodwa lokho akulona iqiniso ngoba kunezikole azaziyo lapho bengaxhaswa khona.
“Sinika umnyango kazwelonke isikhathi sokuphenya ngoba sicabanga nokuya kwiKhomishini yamaLungelo Abantu siyobika umnyango wesifundazwe ngokungaxhaswa kwabafundi ngoba lokho kufana nokubancisha ilungelo lokufunda. Kunezikole esizaziyo lapho abafundi abangenawo omazisi bengaxhaswa.”
Uthe ukuze isikole sithole othisha sinikwe nemali kudingeka sihambise uhlu lwabafundi ababhekwayo ukuthi bakhona noma abekho.
“Umnyango awubaxhasi abangenazo izitifiketi, uthola ukuthi isikole esinabafundi ababalelwa ku-1 500, abangu-1 000 banomazisi abangu-500 abanabo. Umnyango uxhasa abangu-1 000 abanye awubaxhasi ngoba ubathatha njengabantu abangekho ekubeni kumele bathole izincwadi badle,” kusho uThompson.
UThompson uthe le nkinga ayikho ezikoleni zasemakhaya kuphela kodwa ikuzona zonke izikole esifundazweni.
Phambilini inhloko yomnyango uDkt Enock Nzama yatshela Isolezwe ukuthi bayabaxhasa abafundi abangenazo izitifiketi zokuzalwa noma omazisi ngoba bakhona ezikoleni.
UThompson uthe bafuna kuphenywe nenkohlakalo edla lubi emnyangweni wesifundazwe.
Okhulumela umnyango kazwelonke, uMnuz Elijah Mhlanga, uthe lezi zinsolo nezinye ziphenywa yithimba lomnyango elisesifundazweni.
Uthe uNkk Motshekga uhlanganisa ithimba lesibili elizotheleka kulesi sifundazwe elihlanganisa nabavela kwezinye izifundazwe.
“Sisiza umnyango wesifundazwe ngoba kukhona lapho udinga ukusizwa khona. UNgqongqoshe umatasa uhlanganisa ithimba lesibili elizoza eKZN lizosiza. Siyacela ukuthi abantu babekezele siyazi iNatu ibeke umnqamulajuqu wesikhathi esithile sokuthi kube sekulungiswe izinto,” kusho uMhlanga.
Uthe uNkk Motshekga useke wahlangana noNgqongqoshe wezeMfundo uMnuz Mthandeni Dlungwane noNzama ngezinsolo zeNatu.